यसरी बढाउन सकिन्छ आत्मविश्वास | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी यसरी बढाउन सकिन्छ आत्मविश्वास
on: September 01, 2016 रोजगारी
रोजगारीको क्रममा सबैले अन्तरवार्ताको सामना गर्नुपर्छ । अन्तरवार्तामा रोजगारदाताले राजगारी खोज्ने व्यक्तिको आत्मविश्वासको परीक्षण गर्छ । अन्तरवार्ता दिने व्यक्ति आफैमा आन्मविश्वास छैन भने त्यसले अरूलाई विश्वास दिलाउन सक्दैन भन्ने मान्यता छ । सोहीकारण पनि हरेक कम्पनी आफ्ना कर्मचारी आत्मविश्वासी भएको हेर्न चाहन्छ । आत्माविश्वास बढाउनका लागि विभिन्न तालीम तथा वर्कशपहरू सञ्चालन हुने गर्छन् । त्यतिमात्र होइन, आत्मविश्वास बढाउन सघाउने विभिन्न पुस्तक पनि बजारमा पाइन्छन् । आफ्नो आत्मविश्वास परीक्षण गर्ने तथा बढाउने केही तरीका यस्ता छन् :
अरूलाई विश्वास गर्नुहोस्
तपाईंको वरिपरि कस्ता मानिसहरू छन्, विचार गर्नुहोस् । तपाईंले विश्वास गर्ने मानिस कति छन्, त्यसमध्ये कति जनालाई पूर्ण विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? के सबैलाई समान विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? किन सबैलाई समान विश्वास गर्न सकिदैन ? किन विश्वास गर्नुहुन्छ र किन गर्नुहुन्न ? त्यस्ता विषयमा पनि अध्ययन गर्नुहोस् ।
विश्वास व्यवहारले जितिन्छ । तपाईंको अरूप्रतिको विश्वासबारे अध्ययन गर्नुहोस्् । विश्वास गर्नु र नगर्नुको कारण पत्ता लगाउनुहोस् । अरूको कुन व्यवहारले तपाईंको विश्वास टुटेको छ ? कतै तपाईंको व्यवहार पनि त्यस्तै त छैन ? यदि छ भने तुरुन्त छोड्नुहोस् । अरूको र आफ्नो बारेमा अध्ययन र तुलना गर्नुहोस् ।
बोलेको पूरा गर्नुहोस्
भनिन्छ, व्यक्तित्वको पहिचान उसको बोलीबाट हुने गर्छ । उसले पाएको संस्कार र सभ्यता बोल्ने बोलीले बोकेको हुन्छ । बोल्ने, तर पूरा नगर्ने बानीले विश्वास घटाउँछ । धेरै बोल्ने बानी पनि राम्रो मानिँदैन । बोलीको पक्का बन्नुपर्छ । विचार गरेर बोल्ने र बोलेको कुरा पूरा गर्ने व्यक्तिमा आत्मविश्वास छ भन्ने बुझिन्छ । यसो गर्दा सम्मान पाइने र त्यसले आत्मविश्वास बढाउने विश्वास गरिन्छ ।
जुन व्यक्ति आफूले गरेको वाचा पूरा गर्दैन, उसमा आत्मविश्वास पनि रहँदैन । कुनै फैसला गर्नुभयो भने त्यसमा अडिक रहन सक्नुपर्छ । तपाईंले गरेको फैसलामा ठीक छ भनेर आफूलाई यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यदि सक्नुभएन तपाईंमा आत्मविश्वासको कमी रहेछ भन्ने बुझिन्छ । यी कुराहरू तपाईं आफ्नै दिनचर्याबाट हेर्नुहोस् । उदाहरणका लागि– तपाईंले साथीहरूसँग योग गर्ने निर्णय गर्नुभयो । साथीहरूले शुरू गरे, तर तपाईंले गर्नुभएन भने यसले पनि तपाईंमा आत्मविश्वासको कमी भएको बुझाउँछ ।
काम गर्दा वा समाजमा रहदा जोखीम उठाउनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ जोखीम लिने र त्यसलाई सजिलै पार गर्ने उपयुक्त तरीका खोज्नुहोस् । यसले आफूमा आवश्यकता पर्दा नेतृत्व लिन र टिमलाई लिड गर्न सक्ने तत्परता र क्षमताको विकास गर्छ । यो आत्मविश्वास बढाउने गतिलो माध्यम हो ।
धैर्य र विनम्रताको पालना
आत्मविश्वासलाई बढाइरहनमा विनम्रता र धैर्यताको धेरै महत्व रहन्छ । अरूको विचार र ज्ञान सही तरीकाले अँगाल्न पनि आत्मविश्वासको आवश्यकता पर्छ । आफूप्रतिको बढी विश्वास पनि घातक बन्न सक्छ । यसले आडम्बरबाट जोगाउँछ ।
म सुन्दर छैन, कमजोर छु, अथवा म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने भावना हटाउनुहोस् । शुरूमा कोही पनि परिपक्व हुँदैन । तर, म कसरी अगाडि बढ्न सक्छु भन्नेबारे सोच्नुहोस् । मेहनत गर्न नडराउनुहोस् । अरूलाई सोध्नुहोस् र सिक्नुहोस् । तर, विचार गर्नुहोस््, बिचरा नबन्नुहोस् । अरूको दया वा सहयोग मात्र खोज्ने बानीले आत्मविश्वासमा कमी ल्याउँछ ।
म सबैभन्दा भिन्न छु, मलाई मात्र सबै कुरा आउँछ भन्ने अहम्भाव पनि त्याग्नुहोस् । यसले तपाईंको कुरा काट्ने बढ्छन् र तपाईंलाई कसैले रुचाउँदैनन् । यसले एक्लो बनाउँछ ।